Somalia: Ra’iisal Wasaare Rooble Oo Si Dadban Uga Hadlay Falkii Lagula Kacay Shaqaallaha Caafimaadka Edna Hospital - #1Araweelo News Network
Published On: Wed, Jul 21st, 2021
Somalia: Ra’iisal Wasaare Rooble Oo Si Dadban Uga Hadlay Falkii Lagula Kacay Shaqaallaha Caafimaadka Edna Hospital
“Maaha wax la qaadan karo in muwaadiniin looga xannibo socdaalkooda sababo siyaasadeed,” Ra’iisal Wasaaraha Somalia
Muqdisho(ANN)-Ra’iisal Wasaaraha dawladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa si dadban uga jawaabay dhacdadii shaqaalaha caafimaadka ee Adna Hospital lagula kacay maalmihii lasoo dhaafay, xilli ay ku safrayeen Baasaboorka Somaliland oo ay usii jeedeen dalka Kenya.
Hase yeeshe lagu xanibay Madaarka Muqdisho ee Aadan Cadde oo ay kusii hakadeen, kaddibna laga jeex jeexay Baasabooradii Somaliland ee ay siteen oo lagu siiyay fiisaha dalka Kenya, sida ay warbaahinta u sheegay Drs. Edna Aadan oo arrintaa ku tilmaantay mid muujinay nacayb, isla markaana aan meela ka soo gelin shuruucda caalamiga ah ee safarka.
Ra’iisal wasaare Rooble oo maanta ka guddoomay Guddida dib u heshiisiinta Gobolka Gedo nuqulka warbixintii ay ka soo diyaariyeen Gobolkaa oo muddo collaadi ka taagnayd, wuxuu hay’addaha socdaalka ku cannaantay dhacdooyinka noocaa ah.
Mr. Rooble, wuxuu adkeeyey xubnaha wasiirada xukuumadiisa muhiimadda ay leedahay in degdeg loo dhaqan geliyo dhammaan qodobbada ay soo saareen Guddida warbixinta kasoo saaray collaada gobolka Gedo.
Sidaana, waxa lagu sheegay qoraal saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Ra’iisal Wasaaraha oo nuqul ka mid ah soo gaadhay shebekaddaha Araweelo News Network.
Qoraalka, ayaa lagu xusay in ra’iisal wasaare rooble qodob qodob u dul istaagay nuxurka warbixintaa oo xal u ah caqabadaha amni, siyaasadeed iyo arrimaha bulshada ee Gobolka ka taagnaa.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, wuxuu faray Wasaaraddaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya in ay si degdeg ah uga jawaabaan baahiya nololeed ee ka jira Gobolka Gedo, kuwaas oo sida uu sheegay ay soo gudbiyeen Guddida dib u heshiisiinta ee dhawaan kormeeray Gobolkaa.
Wuxuuna Guddida dib u Heshiisiinta Gobolka Gedo uga mahad celiyay sida howlkarnimada ah ee ay uga soo dhalaaleen masuuliyaddii loo xilsaaray, isagoo sheegay in uu u gudbin doono Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Xubanaha Maamulka Degmada Garbahaarreey si uu ugu soo saaro Wareegto.
Dhinaca kale, Ra’iisal wasaare Rooble, wallow aannu tilmaamin, wuxuu si dadban uga hadlay dhacdadii shaqaalaha Caafimaadka ee ka socday Edna Hospital lagula kacay dhowaan, sidaa awgeed wuxuu faray laamaha socdaalka dawladda Federaalka ee Soomaaliya in aan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u kala safraya dalka loo xannibi Karin sababo siyaasadeed.
“Waxaa isoo gaadhay marar kala duwan cabashooyin la xidhiidha muwaadiniin looga xannibay socdaalkooda sababo siyaasadeed, taas oo ah arrin aan la qaadan karin, sidaa awgeed waxaan farayaa Hay’adda Socdaalka in aannay arrimahaasi mar kale soo laaban, ciddii ku kacdana waxa ay mudan tahay xisaab.”ayuu yidhi.
Balse ma caddayn ra’iisal wasaare Rooble dhacdada uu ka hadlayaa in ay tahay falkii foosha xumaa ee lagula kacay shaqaalaha Caafimaadka Cusbitaalka Edna ee ay ka hadashay markii ay madaarka Egal International Airport. ee Hargeysa kusoo dhowaysay shaqaalaha 14 July 2021 iyo in arrinta uu ka hadlayay tahay dhacdooyin kale oo sida uu sheegay lagu siyaasadeeyo safarada dadka Soomaalida ah ee u kala sadcaalaya deegaamo kala duwan iyo gobolo.
Somaliland: Edna Aadan Oo Canbaaraysay Dawladda Soomaaliya Fal Waxashnimo Ah Oo Lagula Kacay Shaqaale Caafimaad